Iindaba - Ufakwa njani umoya ngeminatha yeaquaculture
Ishishini lokuzala lishishini elikhulu kwaye uphuhliso lweshishini lokuzala luhle kakhulu. Sikholelwa ukuba ukufuya iinkukhu kulula kwaye akubizi kakhulu, ngoko ke zininzi iindawo zokukhetha ukukhulisa iinkukhu. Ukuya ekuzaleni, badla ngokukhetha ukusebenzisa umnatha wokufuya Ukuthetha malunga nokuphuma komoya kubaluleke kakhulu, kwaye ukuba umoya osebenza kakuhle uphantsi, iingxaki zinokwenzeka, njani? Eli nqaku ligxile kwindlela yokungenisa umoya ngeminatha ye-aquaculture.
1. Ekulawuleni okulandelayo kwemveliso ye-broiler yasebusika, ukungena komoya kunye nokutshintshana komoya kufuneka kube yingqwalasela ephambili. Amanyathelo athile alandelayo. Izindlu zeenkukhu ezinomatshini wokungenisa umoya zifakwa umoya kusetyenziswa iifeni eziguquguqukayo. Kwizindlu zeenkukhu ezingenawo umoya wokuphefumla ngoomatshini, zonke iifestile, ezinjengeengcango, iifestile kunye nezibane ezikhanyayo akufunekanga zivaliwe ukuqinisekisa ukuba kukho umoya omtsha endlwini ngaphandle kokuba umkhenkce.
2. Ekuqaleni kunye nolawulo lwexesha eliphakathi kwemveliso ye-broiler yasebusika, zombini umoya kunye nokufudumala kufuneka kuthathelwe ingqalelo. Amanyathelo athile alandelayo. Yandisa ukungena komoya kwimozulu xa amaqondo obushushu angenamoya esanda ebusika, kwaye uvule iifestile zokungenisa umoya yonke imihla xa amaqondo obushushu angaphandle ephezulu phakathi kwe-10 kunye ne-15 ebusuku. Lumkela ukungena komoya okufanelekileyo xa kufika umoya obandayo, kwaye oku kunokuvula ukukhanya kwesibhakabhaka kunye nokungena komoya ophantsi ngeefestile.
3. Landela umgaqo wokungenisa umoya: "Musa ukungena umoya kwimeko yomoya, ukhusele emoyeni." Injongo yokungenisa umoya kukubonelela umhlambi ngeoksijini efunekayo, ukunciphisa ukugcwala kweegesi eziyingozi ezifana ne-ammonia, ukunciphisa ukufuma kwendlu, ukususa uthuli nokungcola, nokubonelela ngemekobume efanelekileyo yokukhulisa umhlambi.
Ukusebenzisa umnatha ofanelekileyo wokufuya unokwenza umsebenzi wawo ngokugqibeleleyo kwaye uluncedo kakhulu kumntu wonke. Ukuba unolunye ulwazi kwaye ufuna ukwazi, ungaqhagamshelana nathi ukuze udibane okanye ujonge ulwazi olufanelekileyo kwi-intanethi. Inkampani iqhuba kakuhle ngoku, kwaye kulo mba inetalente enkulu kunye neqela lezixhobo eziphambili kwaye siyakholelwa ukuba ziya kusebenza. Sijonge phambili kwinkxaso yakho eqhubekayo.
Ixesha lokuposa: May-19-2021